Uluhlu lweSyndication kuLwazi lwe-RealtyWW - INethiwekhi yeNtengiso yePropathi kwiHlabathi liphela
UCanzibe 02, 2018 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Ngokufutshane "Ungayenza njani"
1. Cwangcisa esinye sezicwangciso zethu zokubhalisela ezinokufumaneka kwiakhawunti yakho.
Sithumele idatha yakho ye-xml ngokugcwalisa i ifomu zoqhagamshelwano
2.1. Qhagamshelana nathi ukuba ufuna uncedo ekudaleni idatha
Fumana ukuShona kwiShishini lakho
Ukuba uyakha, baya kuza ”. Nabani na onesidima samava kwi-real estate, loo ngcinga iyahlekisa. Kukho izigidi zamakhaya ahleli engenanto kulo lonke Merika ngenxa nje yokuba kungekho mntu waziyo ukuba ukhona! Awungekhe uthengise into ngaphandle komthengi. Ukuba unazo naziphi na izindlu zoluhlu ezifuna umntu oza kubuyela ekhaya, kuya kufuneka ufumane indlela yokubazisa emnyango.
Ngo-2018, ngaphezulu kwe-80% yababuyileyo ekhaya bathi i-intanethi idlale indima ebalulekileyo kwinkqubo yabo yokwakha izindlu. Kwaye phantse bonke abathengi baqala ukukhangela i-intanethi ngaphambi kokuba baqwalasele iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukwazi ukuba kukho izigidi zaba bathengi kulo lonke ilizwe ukukhangela kwiyure emva kwekhaya, kwaye ungabeka uluhlu lwakho ngqo emzileni wabo, ungavuma njani ukuba ungangeni kumdlalo?!
Yongeza ivolumu yakho yezikhokelo
Ilula, ngokwenene. Imalunga nendawo kunye nokuphelisa isibheno. Ukuba ikhaya lakho likwindawo ethengiswe ngokufihlakeleyo efunyanwa ngonogumbe, kwaye ipropathi yakho ibhengeza ukwaneliseka kwangoko ngemifanekiso, kumgangatho ophantsi, iimephu kunye nezinto ezixhaswayo, uyaqiniseka ukutsala i-chunk yabo bathengi kwaye ukonyuse ukukhokelela bala ngokubalaseleyo! I-Trovit, i-Oodle, i-Locanto ne-Rentjungle zimbalwa kakhulu zeendawo eziphambili ze-intanethi apho amakhaya akho abekelwe khona, ngoncedo lweeRealWW Info. Awusenqunyanyiswa kwitrafikhi yeenyawo zabathengi abahlala kumgama oziimayile ezimbalwa zoluntu lwakho. Ngoku ungacofa kumakhonkco avela kwihlabathi lonke ngokubeka amakhaya akho kuwo wonke ukuze abonwe.
Nyusa amaNqaku akho eKhaya nge-RealtyWW
Ukuba unoluhlu lwakho lwasekhaya njengoko i-XML yedatha, nceda ukhululeke Qhagamshelana nathi kwaye ubone indlela iRealWW enokukunceda ngayo ukukhuthaza uluhlu lwakho.
Uluxhasa phi uluhlu lwethu?
I-RealtyWW inezixhobo ezikhethekileyo ezisivumela ukuba sikhuthaze uluhlu lwakho lwekhaya elitsha kumashumi eenjini zokukhangela kunye nezezakhiwo. Singalayisha uluhlu lwakho lwekhaya elitsha kwiindawo ezinjengeTrovit, Oodle, Locanto neRentjungle. Uluhlu olupheleleyo lwamaqabane ethu odweliso ingafumaneka apha.
Kuxhomekeka ekubeni uludwe oluninzi kangakanani okanye inqanaba lomsebenzi obandakanyeka ekunxibelelaniseni uluhlu lwakho lokutya, singaba noluhlu lwakho lwekhaya elitsha kwiinjini zokukhangela ngaphakathi kweentsuku eziyi-1 zokusebenza!
Thengisa amakhaya akho kwizigidi zabathengi abanokubakho ngokusebenzisa ubungakanani obuphezulu beendlela zokukhangela kwiinjini zesizwe ezinamandla okukhangela, ezifana noGoogle kunye neYahoo Real Estate kusetyenziswa uluhlu lwendlela yokuthengisa kuluhlu lweRealtyWW
okwenyaniWW Ngamana 2, 2018
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Uluhlu lweSyndication, Uluhlu lweeSayithi zokuThengisa iiNdawo zokuThengisa izindlu, Uluhlu lweNtengiso yoLwakhiwo, Iinkonzo zoDweliso lweeNdawo eziHlalwayo. Bookmark le Permalink.